Fakeenyoota LibreOffice Math
Fakkeenyoota LibreOffice Math
Kanneen armaan gadii tarreele lakkaddaa foormula LibreOffice Math keessa.
Mallattoole Kasaale waliin
Fakkeenyootni armaan gadii akkaata itti mallattooleen kasaale wajjiin LibreOffice Math keessatti itti uumaman ibsa. Gabatee muraa fayyadamuun fakkeenya kan foddaa Ajaja tiif garagalchitee foormulaa kee keessatti fayyadamu ni dandeessa.
Fakkeenya kabiroo akkaata mallattooleen kasaale waliin LibreOffice Math keessatti uumaman. Gabatee muraa fayyadamuun fakkeenya kan foddaa Ajaja tiif garagalchitee foormulaa kee keessatti fayyadamu ni dandeessa.
Fakkeenyi sadaffaan akkaata mallattooleen kasaale wajjiin uumuf LibreOffice Math fayyadamtu armaan gaditti argama. Fakkeenya kan gabatee muraa keessatti garagalchuun foormulaa kee keessatti foddaa Ajaja keessatti fayyadamu dandeessa.
Fakkeenya akkaata tarreentaan LibreOffice Math wajjiin uumamu. Yoo fakkeenya kana foormulaa kee keessatti fayyadamu barbaaddee, gabatee mura fayyadamuun foddaa Ajaja tti garagalchuu dandeessa.
Tarreentaa hamamtaalee Bocquu Jijjiiramaa waliin
Fakkeenya akkaata tarreenta hamamta bocquu jijjirama wajjiin LibreOffice Math keessatti uumamu. Gabatee muraa fayyadamuun fakkeenya kan foddaa Ajaja tiif garagalchitee foormulaa kee keessatti fayyadamu ni dandeessa.
Tarreentaa Bocquu Yabbuuni
Fakkeenya akkaata itti tarreentaan bocquu yabbu waliin LibreOffice Math keessatti uumamu. Gabatee muraa fayyadamuun fakkeenya kana foddaa Ajaja tiif garagalchuun foormulaa kee keessatti fayyadamu ni dandeessa.
Fakkeenya akkaata faankishiniin LibreOffice Math wajjiin uumamu. Yoo foormulaa kee keessatti fayyadamu barbaadde, gabatee muraa fayyadamuun foddaa Ajaja tiif garagalchuu dandeessa.
Fakkeenya akkaata itti iskuweer rootiin LibreOffice Math wajjiin uumamu. Yoo foormulaa kee keessatti fayyadamu barbaadde, gabatee muraa fayyadamuun foddaa Ajaja tiif garagalchuu dandeessa.
Hangii Guuttee fi Idaati, hamamtaa Bocquu
Fakkeenya akkaata bocquulee fi hamamtaale bocquu foormulaa keessatti LibreOffice Math keessa fayyadamtu.
Kutaan kun fakkeenya akkaata amaloota garagara foormulaa keessa fayyadamtu LibreOffice Math keessa of keessatti qaba.
Title is: Fakeenyoota $[officename] Math